local Archives - Page3of7- Gloria News Journal
ချင်းပြည်နယ်ရှိ ၅၃.၃ ရာခိုင်နှုန်းသော ပြည်သူများသည် ဖျားနာလျှင် ဒေသရှိဒေါက်တာရမ်းကူးများကိုသာ အားထားနေရ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပထမဆုံးသော ပြည်တွင်းအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများထဲတွင် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သော CAD (Community Agency for Rural Development) လူထုအကျိုးဆောင် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလအတွင်းက ချင်းပြည်နယ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကျန်းမာရေးစစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရ၊ ဒေသခံပြည်သူများ၏ ၅၃.၃% သည် မကျ�..
53.3% of Chin people are relying for their health on untrained village health practioners
CAD (Community Agency for Rural Development) which isaMyanmar registered local charity organization (www.cadmm.org), surveyed 1661 people (40 villages, 400 households) to know affect of cultural barriers to health access and services in two townships (Hakha and Than Tlang townships) in the central part of Chin state, Myanmar in May 2015. The respondents are 767 male and 894 females. Here are its findings;
When they are sick, it is reported that 53.3% of respondents go to untrained village health practitioners, 29.4% to government physicians and 12.8% to NGOs. Basic levels of understanding around food hygiene are low among both men and women. Only 6% of respondents said they regularly speak with their partner about their sexual health. And only 11% would like to help teach their children..
စာသင်ချိန် လက်ကိုင်ဖုန်း နှင့် ဂိမ်းမကစားရန် မိုင်းရယ်မြို့နယ်မှ သင်ကြားရေးဆရာ၊ ဆရာမများအား ညွှန်ကြား
မိုင်းရယ် ၊ ဇွန်လ (၁၁) ရက်
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) မိုင်းရယ်မြို့မှ အခြေခံပညာကျောင်းမှ ဆရာ၊ ဆရာမများအား စာသင်ချိန် အတွင်း လက်ကိုင်ဖုန်း အသုံးမပြုရန် နှင့် ဂိမ်းမကစားကြရန် ညွှန်ကြားထား ကြောင်း မိုင်းရယ်ပညာရေးဌာနမှ သိ ရှိရသည်။ မိုင်းရယ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ သင်ကြားရေး ဆရာဆရာမတွေကို စာသင..